- रातो वा सेतो कुन मासु बढी उपयोगी छ: पोषण धेरै adherents निरन्तर आफैलाई प्रश्न सोध्न? एक निश्चित जवाफ दिन एकदम गाह्रो छ। तर क्रममा सबै बुझ्न सबै नै प्रयास गर्नुहोस्।
रातो मासु - के हो?
रातो मासु - घोडा मासु, मासु, मटन, पोर्क। यस प्रकारको लागि आंशिक खरायो लागू हुन्छ। 40:60 को प्रतिशत - यो जनावर रातो र सेतो मासु छ। जनावरको पुरानो हुन्छ जब, सेतो मासु रातो भन्दा ठूलो हुन्छ।
गोरुको मासु - मासु को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकार। तर यो रातो छ कि दाबी, debatable छ। जनावर जवान छ भने, यसको मासु हल्का छ। उमेरअनुसार, यो गाढा बन्नेछ। उदाहरणका लागि, मासु वर्षीया पशु राम्रो सेतो श्रेय हुन सक्छ।
किन एक निश्चित रंग को मासु हो
रातो मासु - के हो? रंग उहाँलाई myoglobin दिन्छ। प्रोटिनको यस प्रकार हृदय र skeletal मांसपेशीमा छ। Myoglobin सबै मांसपेशिहरु मा पाइन्छ, तर फरक मात्रा मा। यो प्रोटिन विभिन्न तरिकामा अक्सिजन संग संतृप्त छ। यो हो र मासु को एक निश्चित रंग भर पर्छ। साथै, प्रभाव को रंग र पशु को उमेर, र यसको गतिविधि (परिभाषित लोड र आन्दोलन को डिग्री)। युवा जनावर लागि फिड को धेरै महत्वपूर्ण प्रकार हो। अक्सर मासु महिलाहरुको भन्दा redder पुरुषहरु छ। जनावर गरेको मांसपेशीमा राम्रो विकास गर्दै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो शरीर एक रंग सन्तृप्ति छ। Myoglobin जवान बीफ जातिहरु धेरै सानो छ।
हानिकारक यदि रातो मासु
गर्न मासु कस्तो बुझाउँछ रातो मासु? कि यो निकाय लाभ ल्याउँछ? यो कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै छ किनभने यो साँच्चै हानिकारक छ भन्ने विश्वास छ। यो पनि बोसो। रातो मासु को तैयारी मा क्यान्सर को उपस्थिति provokes जो कोलेस्ट्रल, विनियोजन गरिएको छ। परंपरागत, सेतो मासु उपयोगी मानिन्छ। अमेरिकी nutritionists, प्रयोग र अनुसन्धान को एक श्रृंखला। तिनीहरूले लाल मासु गर्न हानि समर्थन प्रमाण फेला परेन। तर त्यसपछि डाटा न्याय अस्वीकार गरियो। यो अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका मा मुख्य रूप सञ्चालन गरेका थिए। यहाँ मान्छे एक स्वादिष्ट खान रुचि बीफ स्टेक एक स्वादिष्ट पाप्रो संग। कि यो राम्रो carcinogenic हुन सक्छ। तर यो मासु को लागत सबै इन्कार गर्न भनेर होइन।
मासु कस्तो रातो हुन मानिन्छ? यो साँच्चै त यो कुरा खराब छ? हानिकारक छैन मासु नै र यसको तयारी को विधि। यो तला छ भने, त्यसपछि आवश्यक हानिकारक। यो बिल्कुल, कुनै मूल्य छ छ यो सेतो वा रातो छ।
अमेरिका को ती विद्वान महिलाहरु रातो मासु को आहार देखि बहिष्कृत भने, यो तुरुन्तै आफ्नो उपस्थिति असर कि फेला परेन। पशु प्रोटिन स्रोत बस बेबदल छ।
तपाईं रातो मासु चाहनुहुन्छ भने, यो meatless प्रजातिहरू प्रयोग गर्न लायक छ। फलस्वरूप, तपाईं एकदम जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो पकाएको छ जसमा तरिका हो छैन कम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, दुबला मासु को patty, तपाईं ग्रिल मा, निकै, फैटी भन्दा लाभ हुनेछ तेल को एक ठूलो रकम मा तला पकाउन।
रातो मासु फलाम मा धनी छ। यो उपयोगी छ?
मासु कस्तो रातो भनिन्छ - हामी पहिले नै पाएका छन्। यो शरीर को लागि कुनै पनि राम्रो गर्न केहि छ कि? आज भिटामिन कमी को घटना छलफल गर्ने निर्णय गरे। भिटामिन र खनिज को अतिरिक्त बारेमा तिनीहरूले धेरै सानो भन्नुहोस्। रातो मासु - हाम्रो शरीर मा एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता फलाम छ।
एक व्यक्ति यो खनिज के रकम आवश्यक गर्छ? यो अक्सर हाम्रो शरीर फलाम आवश्यक छ कि हुन्छ। फलस्वरूप, यो एक उच्चारण तरिका रक्तअल्पता चिन्ह लगाइयो। फलाम शरीर मा accumulates र देखिदैन भने, त्यसपछि यो हाम्रो स्वास्थ्य गम्भीर खतरा बन्न सक्छ। क्यान्सर जस्तै यस्तो भयानक रोग को संभावना घटना। एकदम यो एक अधिशेष टिप्पणीहरू छ कि छैन भनेर, संचित छ धेरै फलाम कसरी बाहिर आंकडा गाह्रो। त्यहाँ मात्र अप्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। तिनीहरूलाई को - धेरै pigmentation।
तर यो फलाम रातो रक्त को गठन समावेश छ थियो। यी कक्षहरूको menses भाग समयमा हराएको छ। परिणाम थकान, कम दक्षता, निद्रामा बाधा र निराशा हुन्छ छ। यी सबै कारक छाला र नङ को अवस्था असर गर्छ।
मासु कस्तो, रातो सेतो र के हो? यो चरा मासु दुवै प्रकारका छन्। पखेटा र लोकप्रिय स्तन - सेतो; रातो मासु - धेरै खुट्टा द्वारा प्रेम गर्नुभयो। एउटै टर्की बारेमा भने गर्न सकिन्छ। सेतो जवान दुबला पोर्क पनि बुझाउँछ। यो, उदाहरणका लागि, काटन। तर ज्यादातर पोर्क - रातो मासु। यो चिकन वा माछा भन्दा धेरै प्रोटिन हो।
रातो मासु - के हो? किन सेतो शरीर लागि बढि लाभदायक मानिन्छ? शायद यो कम पौष्टिक छ किनभने। असंतृप्त बोसो धेरै प्रकार को सेतो मासु। प्रोटिन माछा पाइने, धेरै उपयोगी छ। Nutritionists सेतो मासु धेरै सानो प्रोटिन समावेश भन्छन्। तर यो होइन यो कम राम्रो छ। एक व्यक्ति, वजन गुमाउन शरीर मा कोलेस्ट्रल को मात्रा कम र सही खान चाहन्छ भने, यो सेतो मासु चयन गर्नुपर्छ।
एक आहार के खान
रातो मासु - के हो? यो आहार समयमा अनुमति? छ कि छैन एक व्यक्ति कोलेस्ट्रल अत्यन्तै सानो इन्जेस्टेड गर्नुपर्छ जसमा एक विशेष आहार, बताउँछ भने, पूर्ण पोर्क, पाठो र बीफ को आहार देखि बहिष्कृत गर्नुपर्छ। आदर्श - meatless प्रजातिहरू: कुखुरा, माछा, सुँगुरको tenderloin, बाछाको मासु।
त्यहाँ रातो मासु पूर्ण आहार देखि बहिष्कृत छ जसमा आहार को प्रकार पनि छन्। यस मामला मा, तपाईं मात्र टर्की, चिकन, दुबला पोर्क र माछा छ। तिनीहरूलाई फोडा गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
उपयोगिता मासु को कारक मा मात्र एक निश्चित ग्रेड असर गर्छ। पनि महत्त्वपूर्ण प्रयोग गरिएको छ जो गर्मी उपचार को तरिका हो। शरीर अधिकतम लाभ हुन्छ कि, तपाईं पूर्ण धूम्रपान र पोलेको मासु त्याग्न पर्छ। यस्तो स्वादिष्ट पाप्रो मा आवश्यक carcinogens जम्मा। सबै को सबै भन्दा राम्रो, जोश यस्तो उत्पादन सेंकना गर्न वा ग्रिल मा खाना पकाउन। यस मामला मा, यो बोसो प्राप्त र अधिकतम लाभ राख्न गर्दैन।
राम्रो खाना र स्वस्थ रहन!
"मास्को आलु" - साथ रूसी वर्ण चिप्स
Basturma - यो के हो?
कजानमा प्रहरी कार्य र घटनाको परिणाम
दस्तावेज र उपकरण: तपाईं एक स्टोर खोल्न आवश्यक के
Java पहिलो कार्यक्रम - नमस्ते विश्व
निसान कीरा को सकारात्मक र नकारात्मक otzvy
प्रशासनिक व्यय कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
Aldehydes शारीरिक गुण